News - Gịnị bụ ihe dị iche na ikanam ngosi, LCD, Projector Ma DLP?
Ikanam bụ "Light Emitting Diode", nke kacha nta unit bụ 8.5 inch, nwere ike pixel mmezi na unit modul mgbanwe, Ikanam ndụ oge karịa 100,000 awa.
DLP bụ “Digital Light Procession” nha gbasara 50inch ~ 100inch ， oge ndụ gbasara elekere 8000. kwesịrị N'ogbe nnọchi ma ọ bụrụ na projecting bọlbụ na panel nwere nsogbu.
1. Mgbanwe nke gburugburu ebe obibi nke nchapụta
Ngosipụta ngosi DLP \_ LCD adịghị elu. Ambient ihie bụ nditịm ejedebe ； ekwesighi elu brighness ọrụ ma ọ bụ akara ụlọ gburugburu ebe obibi.
Ikanam ngosi nchapụta nwere ike ịgbanwe n'etiti 600-1500cd ， uwe maka gburugburu ebe obibi dị iche iche.
2. Ihe ngosi
Ngosiputa LCD ， n'ihu ya ka ejikere translucent ma obu oku ndu.
DLP na ngwa bara uru, ga-enwe mmetụta ntụgharị.
Ikanam n'ihi na ọ bụ n'amaghi ìhè unit, na ọchịchịrị matte nwa obubọk, nwa ada oriọna elu, otú na agba okwu nke ọ bụla n'akuku nwere ike nọgidere na-enwe-emebibeghị.
3. elele anya were were
4. Ngosipụta ngosiputa ihe
5. iche ruru tụnyere
Ikanam eji oriọna na-acha oji, elu ihuenyo bụ ụdị ụdị ụdị. ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ akara ngosi ọ bụla gosipụtara ìhè, Yabụ ihuenyo dị iche iche dị elu dị ka 4000: 1, na-eme ka ngosi ngosi Ikanam gosi nkọ ma doo anya.
Imirikiti atụmatụ DLP dị iche iche nwere ike ịbụ 600: 1 ka 800: 1, ọnụ ala nwere ike ịbụ 450 ： 1。LCD ihe nrụpụta dị iche iche gbasara 400: 1 ， na ọnụ ala dị naanị 250 only 1.
Mgbidi vidiyo DLP
DLP maka ihe gbasara gburugburu ebe obibi dị oke elu, dị ka ọnọdụ okpomọkụ, iru mmiri, uzuzu, ọkụ, wdg, ọkachasị ihuenyo kachasị dị nro, ịkachapu akara dị larịị enweghị ike ihicha ma mezie ya, enwere nnukwu nsogbu abụghị oge oge ọ ga-agụgharị ya n'ụlọ akwụkwọ, ma ọ bụghị ya, onyogho a ga-akwụ ụgwọ ozugbo Ọdịiche DLP dị nnọọ ala, gosipụtara na ntụpọ ngosipụta gbara ọchịchịrị, ya bụ, ọtụtụ onyonyo nke ọnọdụ gbara ọchịchịrị edochaghị anya, ọhụụ a doro anya. Dị ka akwụkwọ ndetu nwere ike ịhụ ọnọdụ gbara ọchịchịrị, na ihuenyo DLP na oji, enweghị ike ịmata ihe dị iche, yabụ mgbe ejiri ya na nyocha ihe oyiyi, ogo ihe oyiyi ga-ebelata nke ukwuu. DLP projector adịghị ike naanị otu, ya bụ, "egwurugwu utịp", arụmọrụ a kapịrị iche site na agba nke acha ọbara ọbara, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-acha anụnụ anụnụ atọ monochrome, dị ka egwurugwu egwurugwu.
Ihe ọghọm doro anya nke LCD bụ na ọkwa ojii ahụ dara ogbenye na ọdịiche ahụ adịchaghị oke. Agba ojii nke ihe ngosi LCD na-adịkarị ntụ ntụ, akụkụ ndo nwere ọchịchịrị na enweghị nkọwa. Nke a adịghị mma maka egwu vidiyo, nke na-adịghị mma maka ihe nkiri ahụ, mana ọ bụghị nnukwu ihe dị iche na DLP projector mgbe ị na-egwu okwu. Ihe ndapụta nke abụọ bụ na nsonaazụ LCD gosipụtara ngosipụta pikselụ, onye na-ekiri ya na-egosi ihe oyiyi ahụ site na lattice. . Thedị SVGA (800 x 600) nke ihe ngosi LCD, n'agbanyeghị ogo onyonyo ihuenyo, enwere ike ịhụ nke ọma na pikselụ grid belụsọ na ejiri ngwaahịa nwere mkpebi dị elu. LCD malitere iji micro lens arịrịọ (MLA) ugbu a, nwere ike imeziwanye usoro mbufe nke usoro XGA nke ogwe LCD, nkesa mgbasa nke pikselụ, ụzọ aghụghọ na-apụtaghị ìhè, na ịdị nkọ nke ihe oyiyi agaghị eweta mmetụta ọ bụla. O nwere ike belata ihe pikselụ pikselụ nke LCD ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị ọrụ DLP, mana ọ bụ ntakịrị ọdịiche.
HD Ikanam uru
1. Karịrị 100,000 awa nke ndụ oge
3. Kacha mma agba arụmọrụ
2.Superior okpomọkụ dissip arụmọrụ
4.Low mmezi na-eri
1. karịa More 100000 awa ndụ oge
The radiating elu bụ ike, aluminum efere Ọdịdị ， Dum ahu okpomọkụ conduction okpomọkụ dissipation, nwere ike ịbụ ihe kasị mma okpomọkụ dissipation ；
Flank profaịlụ dissipation: Okpomoku di n’igbe a na agbasasia site n’akuku, wee jikota ogwe aka, Na shea azu n’azu abuo nke e guzobere uzo di elu na nke ala, iji ikuku ikuku meputa ikuku nke elu na ala. mgbasa ụkpụrụ, ikpochapu ọkụ kpamkpam.
Principlekpụrụ ngosi nke ọkụ RGB na-enweghị atụ na-ejigide eziokwu nke agba ahụ, na-ezere ụcha agba na ntụgharị nke ihe na ụzọ na-agba ọsọ na teknụzụ nke ntughari na amụma.
YWTLED All In One LED - TV bụ ọkụ na-enweghị atụ, na ọchịchịrị gbara ọchịchịrị ojii, ọchịchịrị ọkụ ojii, ka enwere ike idozi agba agba nke ọhụụ ọ bụla.
Ọnụ mmezi dị ala
Ikanam ọkọlọtọ unit ， ngosipụta na-emi esịnede nta nkeji; ngosi pikselụ mejupụtara nke onye ikanam oriọna.
Ọ bụrụ na e nwere ebe a ga-eji mee ya, dochie ya ma dozie oriọna LED ；
Ọ bụrụ na ndị panel na-egosi unrecoverable, a obere ngosi obubọk nwere ike dochie anya ；
Dịka ọmụmaatụ, mpaghara ngosi 32-inch bụ naanị 4% nke ogwe omenala.
Isi ihe dị ugbu a bụ 46-inch, 55-inch, na 60-inch splice unit, yana ọnụahịa dị ala karị.
Ikanam dịghị ihe dị iche mgbe unit idozi
Mgbe dochie otu ikanam, nwere ike ịhọrọ oriọna ikanam echekwara na mmepụta. na nchapụta otu isi mgbazi nwere ike rụrụ na-ya na-agbanwe agbanwe ；
Mgbe ị na-eji dochie modul unit, a na-eji modul na ogwe niile eme ihe maka nkwekọ na-agbanwe agbanwe, nke mere na agba ọkụ na nchapụta na-agbanwe agbanwe na ọnọdụ ugbu a nke ihuenyo ọrụ.
LCD video mgbidi Nnukwu ihe dị iche iche mgbe arụchara ọrụ
Nnọchi unit na agba na ihie niile ọhụrụ ala, ọ dịghị attenuation, nnọọ edo na-enwu gbaa ；
Ngwongwo ndị ọzọ dị na mbụ, ka ejiri ogologo oge mee ihe, ngbachapụ ọkụ na nge ihu na ihe ndị ọzọ, dịka ntụgharị nke ntụ ntụ, ụcha, na nchapụta ajụla n'ụzọ siri ike ；
Enwere nnukwu ọdịiche dị na nsonaazụ anya niile。